Ukusatshalaliswa okuncane okwaziwayo kwe-GNU / Linux hhayi ku-DistroWatch | Kusuka kuLinux
Namuhla, sizophawula ngokuncane okungaziwa Ukusatshalaliswa kwe-GNU / Linux, futhi ngalokhu sizocaphuna ezinye ezikhona njengamanje "Uhlu Lokulinda lwe-DistroWatch" ukubuyekezwa nokufakwa okulandelayo ku- "Uhlu oluyinhloko lwe-Distros" ebonakalayo.
Okwalabo okungenzeka abangajwayele iwebhusayithi ye I-DistroWatch, kuhle ukucacisa futhi ukuthi iyiwebhusayithi enikezelwe ukukhuluma, ukubuyekeza nokugcina ulwazi lwanamuhla lwazi Izinhlelo zokusebenza de Umthombo Ovulekile. Leli sayithi ligxile kakhulu kufayela le- Ukusatshalaliswa kwe-Linux futhi i Ukunambitheka kwe-BSD, yize kwesinye isikhathi kukhulunywa ngamanye ama-Open Source Operating Systems.
I-SerenityOS: I-Distro yesimanje efana ne-Unix ene-interface yama-90s yakudala
Ngaphambi kokubuyekeza lokho okungaziwa kancane Ukusatshalaliswa kwe-GNU / Linux, kufanele uqaphele ukuthi I-DistroWatch iyiwebhusayithi enkulu futhi eyigugu esivame ukucaphuna kuyo Ama-Distros adumile we-GNU / Linuxnjenge I-MX Linux. Yize kwesinye isikhathi sihlangana nezinye ezingekho ngisho naku- "Uhlu Lokulinda lwe-DistroWatch", njengendaba ye- I-SerenityOS, esikubukezile encwadini yangaphambilini, esikumema ukuba uyihlole ngemuva kokuphela kokushicilelwa kwamanje.
1 Ukusatshalaliswa kwe-GNU / Linux kuhlu lokulinda lwe-DistroWatch
1.1 Ukusatshalaliswa Okufakiwe kwe-GNU / Linux
1.1.2 I-OS ephawulekayo
1.1.3 I-Fenix ​​OS
Ukusatshalaliswa kwe-GNU / Linux kuhlu lokulinda lwe-DistroWatch
Ukusatshalaliswa Okufakiwe kwe-GNU / Linux
Phakathi kokufanele kakhulu I-GNU / Linux Distros esikutholile kufayela le- "Uhlu Lokulinda lwe-DistroWatch" sizocaphuna:
Ingene ohlwini ngo-02/02/2021.
Kukhule ngokugcwele, kepha inguqulo ezinzile ekhishwe yokusatshalaliswa okushiwo kulindeleke kwikota yokuqala ka-2021.
Yimfoloko yomthombo ovulekile i-RHEL (i-Red Hat Enterprise Linux) eyakhiwe yithimba le-CloudLinux, futhi eligqugquzelwe umphakathi, ngakho-ke, lakhiwa ngokubambisana nomphakathi.
Ihlose ukugcwalisa isikhala esishiywe ukunyamalala kwenguqulo ezinzile yeCentOS. Kungakho, kuyigatsha elihambisanayo le-1: 1 le-RHEL® 8.
ICloudLinux izinikele ekusekeleni i-AlmaLinux kuze kube unyaka ka-2029, kufaka phakathi izibuyekezo ezizinzile nezihloliwe ngokuphelele nezimagqabhagqabha zokuphepha.
Ingene ohlwini ngo-14/01/2021.
Kusatshalaliswa kwe-GNU / Linux yohlobo lweRolling Release okuhloselwe abathanda ubuciko emkhakheni wemultimedia nemidlalo.
Kususelwa ku-Arch Linux, futhi iza ngaphambi kokulungiswa ngeqoqo elihle lezinhlelo zokusebenza ze- "Out of the Box" ukusiza, ngaphezu kwakho konke, abasebenzisi abasha be-GNU / Linux baqale ngokushesha, ngaphandle kokucwaninga, ukulanda nokufaka lokhu. .
Iza nemodi ebukhoma nomsebenzisi ozenzakalelayo (liveuser) ngaphandle kwephasiwedi. Futhi, ukungena ngemvume okuzenzakalelayo kunikwe amandla kuseshini ebukhoma.
Kunezinguqulo ezimbili ze-Salient OS, inguqulo ene-XFCE nenguqulo ene-KDE Plasma. Futhi ekufakweni kwayo inikeza i- «Live Installer», kumenyu enkulu ngaphansi kwesigaba seSistimu, enegama elithi «Faka i-Salient OS». Ngaphezu kwalokho, isebenzisa isifaki seCalamares ngokuzenzakalela, esizilayisha ngokuzenzakalela kwideskithophu.
Ingene ohlwini ngo-04/12/2020.
Kusatshalaliswa kwe-GNU / Linux okuthuthuka ngokugcwele. Iza nohlelo lwe-PI lwedivayisi ye-PI ne-MX Linux-based PC edition. Yize unjiniyela wayo ethembisa ukuguqula isisekelo sezinguqulo ze-beta ezizayo ze-PC.
Enye yezinhloso zayo eziphambili ukunikela ngesibonisi esinobungani esisuselwa ekubukekeni okufanayo kwamanye ama-Operating Systems anjenge-MacOS (X ne-classic), kanye nezinhlobo ezahlukahlukene zepulatifomu ye-Microsoft, kusuka ku-Windows 95 kuye ku-Windows 10, kudlula i-XP edumile. , 7, phakathi kwabanye.
Uhlelo lwayo lwe-Raspberry Pi Devices lunikeza ukusetshenziswa okulingene okuphakathi kwe-1 GB RAM, kanye nekhono lokuzivumelanisa nokwakhiwa kwe-ARM yamachips ayo.
Bayakwazi ukubona abanye Ukusatshalaliswa kwe-GNU / Linux we "Uhlu Lokulinda lwe-DistroWatch" ngokuchofoza okulandelayo isixhumanisi bese ubheka isigaba esingaphansi kwencazelo ngesiNgisi ngezansi: "Ukusatshalaliswa Ohlwini Lokulinda ". Ngenkathi, uma kwenzeka ufuna ukuhlola okungaphezulu okungu-2 ngaphezulu, okungaziwa kangako futhi okungafakwanga ohlwini, sincoma ukuthi uchofoze kulezi zixhumanisi ezi-2 ezilandelayo: Isixhumanisi se-1 y Isixhumanisi se-2.
Siyethemba lokhu "okuthunyelwe okuwusizo okuncane" mayelana nokunye okuvelele kakhulu «Distribuciones GNU/Linux», okufana nanamuhla okukhona ku- "Uhlu Lokulinda lwe-DistroWatch" ukubuyekezwa nokufakwa okulandelayo ku- Uhlu oluyinhloko lwe-Distros ebonakalayo; inentshisekelo enkulu futhi iyasiza, kuyo yonke «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» kanye negalelo elikhulu ekusabalalisweni kwemvelo emangalisayo, enkulu futhi ekhulayo yezicelo ze «GNU/Linux».
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » I-GNU / Linux » Ukusatshalaliswa okungaziwa kancane kwe-GNU / Linux hhayi ku-DistroWatch
U-Oscar Reyes Guerrero kusho
I-athikili enhle ... Ngicabanga ukuthi iSerenityOS igxile kwi-nostalgic kakhulu
Phendula u-Oscar Reyes Guerrero
Ngiyabingelela, Oscar. Siyabonga ngokuphawula kwakho okuhle. Futhi yebo, ngicabanga ukuthi kunabathandi abaningi be-retro abazohlola iSerenityOS.
Lezi yizinguquko ezamenyezelwa ku-beta ye-Chrome 89